Swarmify: Afar Sababood oo aan Loo Isticmaalin Cunnooyinka Fiidiyowga YouTube-ka Websaydhkaaga Ganacsi | Martech Zone
Haddii shirkaddaadu leedahay fiidiyowyo xirfadlayaal ah oo aad kumanaan doolar ku bixisay, waa inaad gabi ahaanba ku daabacdaa fiidyowyada YouTube-ka si aad uga faa'iidaysato natiijooyinka raadinta YouTube…. kaliya iska hubi inaad adiga hagaaji YouTube-kaaga fiidiyowyada markaad sameyso. Taasi waxay tiri, maahan inaad ku dhexjirto fiidiyowyada YouTube boggaaga shirkadda… sababo dhawr ah awgood:
YouTube ayaa ku raad jooga adeegsiga fiidiyowyadaas xayeysiinta la beegsaday. Maxaad u dooneysaa inaad ula wadaagto ujeedka booqdayaashaada Google si ay ugu riixaan xayeysiinta tartamayaashaada?
Ilaa aad ilowdid mooyee, waxaad u badan tahay inaad baxeyso fiidiyowyada khuseeya tartamayaashaada ciyaaryahankaaga YouTube-ka ah! Qiyaas inaad booqato bartaada, daawashada fiidiyowgaaga, ka dibna fiidiyowga tartankaaga ayaa loo soo bandhigayaa inuu yahay beddel ku habboon. Hoog!
Rumayso ama ha rumaysan, YouTube dhab ahaan waa gaabis ah iyo fiidiyowyadu badanaa ma bilaabaan gebi ahaanba mararka qaarkood maadaama fiidiyowgu uu duubmayo. Haye… waa lacag la'aan, sax? Waa hagaag… maaha ganacsi isku dayaya inuu xiro macaamil ma aha. Waxaa jira gabi ahaanba kharash si loo dedejiyo internetka.
Cayaaraha fiidiyowga ee YouTube-ka aad uma ahan loo habeyn karo… Fiirso fiidiyowgan hoosta ku yaal oo aan ku haysto xulashooyin yar oo aan kala dooran karo… ka daawan karo YouTube, dhagsii xiriiriyaha si aad uga furto YouTube, Ka Daawasho Mar dambe YouTube, La wadaag, ama riix ciyaarta. Dhammaantood waxaa loogu calaamadeeyay YouTube halkii laga heli lahaa sumaddaada. Maxaa diidaya kaliya ciyaartoy aan mashquul-lahayn oo shaqeeya?
Waxay u badan tahay inaan kugula taliyo inaad iska ilaaliso martigelinta fiidiyowyada boggaaga sidoo kale. Marti galiyahaaga caadiga ah ma laha kaabayaal awood u siiya kumanaan booqdayaal ah. Xaqiiqdii, waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ku jebin karto qaar ka mid ah marinnada soo dejinta oo lagaa qaadi doono lacag intaa ka badan. Xaqiiqdii waxaad rabtaa marti-qaade fiidiyow ah… kaliya maahan YouTube.
Sug ilbiriqsi, waxaad dhahdaa 'Doug… adiga had iyo jeer gundhig fiidiyowyada YouTube ee boggaaga. Hagaag, dadweynow, kani waa daabicid ... ma ahan goob ganacsi. Runtii waan jecelahay gundhigga fiidiyowyada YouTube-ka si hal abuureyaashu u helaan aragtiyo iyo fursado dheeri ah oo loogu talagalay dadka waawayn si ay u helaan ugana mid noqdaan. Marka aan haysto fiidiyowyo xirfadlayaal ah oo aan u sameeyo meheraddayda, waxaan gabi ahaanba ku martigelin doonaa iyaga Iskudar.
Waxaa jira, dabcan, mid kale oo ka reeban… waxaad tahay 'YouTuber'!
Swarmify SmartVideo: Marti Gelinta Fiidiyowga
Swarmify waxay bixisaa xal adag oo deg deg ah oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay websaydhkaaga shirkadda. Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud:
Iskudar waxay bixisaa qaar ka mid ah astaamaha cajiibka ah:
CDN - Waxay leeyihiin caalami ah shabakada bixinta nuxurka (CDN), taasoo la micno ah inuu jiro daahitaan aad u yar oo u dhexeeya shakhsiga codsanaya fiidiyowga iyo meesha lagu qaybinayo.
Loo maqli Buffer-Free - SmartVideo waxay isticmaashaa xalka bixinta alaabta ee la sugayo ee Swarmify, iyadoo si weyn hoos loogu dhigay 8x.
Isuduwaha Sii Socda Video Streaming - Inta lagu guda jiro dib u ciyaarista, SmartVideo waxay si joogto ah ula socotaa khibradda fiidiyowga ee qof kasta oo adeegsade ah waxayna ka hortageysaa guul darrooyinka inta aysan dhicin.
Dejinta Qalabka - Soo-booqdayaashu waxay fiidiyooga ugu fiicnaadaan qalabkooda si ay u bixiyaan khibrada ugu fiican. Walwal la'aan-isla markaana si otomaatig ah loogu cusbooneysiiyo aaladaha cusub.
Nadiifi, Ciyaar Joog-Joogto ah - Samee iibsiyo badan, oo yaree heerarka kacsiga adoo ka dhigaya martida inay diiradda saaraan astaantaada. Astaamaha waaweyn iyo fiidiyowyada la xiriira waxaa loogu talagalay inay kaa qaadaan macaamiishaada.
WordPress Plugin - Looma baahna in lagu mashquuliyo qoraallo iyo xaragyo, SmartVideo waxay leedahay qalab si ay kuu kiciso oo aad si fudud ugu socoto.
Qiimo u goynta - Ma ahan in lagugu ciqaabo u adeegida waxyaabo tayo sare leh bartaada. Taasi waa sababta qaansheegadka SmartVideo uusan ugu saleysneyn xadka xawaaraha, kaliya muuqaalka muuqaalka.
Waa tan isbarbardhiga dhinac-dhinac ee xawaaraha:
YouTube Video Cudarada
Haddii taasi aysan ku filnayn, SmartVideo si toos ah ayey uga soo qaadataa fiidiyowyadaada YouTube-ka, iyaga ayaa codeynaya, oo ku keydinaaya. Intaa ka dib, ciyaaryahanka YouTube-ka ayaa gabi ahaanba la beddelay fiidiyowyadiina waxaa lagu martigaliyay shabakadeena gaarsiinta adduunka waxaana loogu adeegsaday tikniyoolajiyaddeenna isdaba-joogga ah.
Ku Bilaw Swarmify
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Ku wareeji SmartVideo.
Tags: gilgishayganacsiga fiidiyowga ganacsigamartigelinta fiidiyowga shirkadahadeg deg ah video martigelinsmartvideoisdaadimuqaal cdnCodeynta videomartigeliyaha fiidiyowgafiidiyowga fiidiyowgaplugin WordPressBeddelka YouTube
Waa Maxay MarTech? Teknolojiyada Suuqgeynta: Waagii hore, Hada, iyo Mustaqbalka
Sidee buu Xayeysisku u shaqeeyaa? Maxaa dadka ka dhigaya inay iibsadaan?